दलित तथा विपन्न नागरिकलाई उच्च शिक्षा पढ्नको लागि “उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कोष” स्थापना गरेका छौँः मेघनाथ कोईराला
मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८ ०७:२१:५९ युनिकोड
बिहिबार, असोज २१, २०७८ Dhading Sanchar
नीलकण्ठ नगरपालिकाका स्रोतव्यक्ति मेघनाथ कोईरालासँग नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको गतिबिधी,यो आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने कार्यक्रम लगायतको विषयमा रामकुमार थापाले गर्नुभएको कुराकानीको अस्मिता पोख्रेलद्धारा सम्पादित अंशः
१. नीलकण्ठ नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा के गरीरहेको छ ?
नीलकण्ठ नगरपालिकाले विगत देखि नै नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ। कोभिड १९ को कारणले विद्यार्थीहरुलाई भौतिक रुपमा कक्षा कोठामा अध्ययन अध्यापन गराउन नसकिरहेको परिस्थितिमा प्रविधिमैत्री शिक्षणमा जोड दिनु पर्छ,विद्यार्थीहरुले प्रविधिको प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सहज तरिकाले सिक्न सक्छन् र त्यस्को सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने उद्धेश्यले हामीले यो भन्दा अघिल्लो वर्ष बाल विकास कक्षा व्यवस्थापन भनेर स्मार्ट टेलिभिजन सहित बाल विकास कक्षा व्यवस्थापनलाई बजेट निकासा गरिसकेका छौँ । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय स्मार्ट टिभि जडान पनि भइसकेको छ र प्रयोगको रुपमा आइसकेको छ।
हाम्रो अघिल्लो वर्षको कार्यक्रममा हाम्रो माध्यमिक र निम्न माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट सहितको स्मार्ट टेलिभिजनका माध्यमबाट शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई सहजता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ कार्यक्रम राखेका थियौँ । हामीले सबै सरकारी अनुदान गर्ने शिक्षकहरुलाई ५० प्रतिशत साझेदारीमा ल्यापटप वितरण गर्ने योजना छ।
त्यो योजना अनुसार नीलकण्ठ नगरपालिकामा ल्यापटप आईसकेको छ। ६–८ देखि ९–१० सम्म चलेको विद्यालयलाई स्मार्ट टेलिभिजन दिने कार्यक्रम अनुसार स्मार्ट टेलिभिजन आईसकेको छ। दशै भन्दा अगाडि नै वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अहिले नयाँ ढङगले नयाँ सोचका साथ नीलकण्ठ नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भन्ने योजना छ ।
२. नीलकण्ठ नगरपालिकाको १४ वटा वडा भित्र रहेको सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई ल्यापट वितरण गर्ने हो ?
यसपालि १६६ शिक्षकहरुलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। दशैँ भन्दा अगाडि नै वितरण गरेर सक्छौँ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ६० लाख रुपैया विनियोजन गरीएको छ। १६६ शिक्षकलाई अगामी वर्ष ल्यापटप वितरण गर्छौँ। यसरी क्रमैसँग सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने सरकारी अनुदान प्राप्त सबै शिक्षकहरुलाई ल्यापटप वितरण गर्ने र कम्प्युटर तालिम पनि अगाडि बढाउने योजना रहेको छ।
३.गाउँगाउँमा नेटको सुविधा पुगिसकेको छ नगरपालिकाले व्यवस्था गरीरहेकोे छ । अब उहाँहरुले विद्यार्थीहरुलाई कस्तो शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ ?
नीलकण्ठ नगरपालिका शिक्षा शाखाले एउटा सपना देखेको छ । विद्यार्थीहरु समय सापेक्ष उनीहरुको इच्छा आकांक्षा के छ त्यो अनुरुप मात्र हामीले शिक्षा सिकाई क्रियाकलाप संचालन गर्न सक्यौँ भने हामी सफल हुन्छौँ ।गाउँगाउँमा विद्यार्थीहरुले धेरै टेलिभजन हेर्छन मोबाईल चलाउछन् भनेर अभिभावकहरुबाट गुनासो आईरहेको हुन्छन् ।
उनीहरु त्यसैमा रुची राख्छन् भने त्यही माध्यम प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप संचालन गर्दा पक्कै पनि सहजता प्रदान हुन्छ। प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेट कनेक्सन गर्ने योजना छ। यो वर्ष प्रत्येक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट कनेक्सन सुविधा पु¥याउँछौँ। विस्तारै १–३, १–५ चलेका विद्यालयमा पनि पठाउने लक्ष छ। सबै सामाुयिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पहुँच पु¥याउनको लागि नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता भइसकेको छ ।
सबै विद्यालयहरुमा प्रविधिको पहुँच पु¥याउने, सुनिश्चितता गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि शिक्षकहरुलाई पनि प्रविधि मैत्री बनाउने र सिप सम्बन्धि तालिम दिने योजना रहेको छ। त्यो अनुसार नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ तर कोभिडको कारणले समयमा सके जति कार्यक्रम गर्न सकिरहेका छैनौँ । अहिले पनि समस्या छ कोभिडको कारणले प्रशासनबाट विद्यालय भौतिक रुपमा संचालन नगरौँ नगराउँ भन्ने सुचना छ।
हामीले कुनै पनि विद्यालयलाई भौतिक रुपमा कक्षा संचालन गर्नु गराउनु भनेर निर्देशन दिएका छैनौँ । तर हामीले विद्यार्थीको भविष्यलाइ ख्याल गरेर अभिभावकबाट सहमति लिन सक्नुहुन्छ भने मात्र विद्यालय संचालन गर्नुहोला नत्र विद्यालय संचालनको लागि अनुमति दिन सक्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। विद्यार्थीहरुको आन्तरीक रुपमा हुनु पर्ने परिक्षाहरु, दैनिक रुपमा गर्नु पर्ने शिक्षण सिकाई क्रियाकलापहरु संचालन नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर भएन बालबालिकाको भविस्यको लागि रिस्क मोल्नको लागि बाध्य भएका छौँ भन्ने गुनासाहरु शिक्षकहरु र अभिभावकबाट आएका छन्।
४.नगरपालिकाले लिखित या मौखिक रुपमा विद्यालय खोल्नु भनेको छैन,भोलि संक्रमण विद्यालयबाट फैलियो वा जोखिम भयो भने त्यस्को जिम्मेवारी स्वयम विद्यालय हुन्छ ?
यस्तो परिस्थिति छ, परिस्थिति घटनालाई मध्यनजर गरेर विद्यालय नखोल्नुहोस् नै भनेका छौँ। शैक्षिक शत्र २०७७ को लागि हामीले कार्यविधि बनाएका थियौँ। बैकल्पिक शिक्षण सिकाई कार्यविधि भनेर नगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएका थियौँ। त्यो कार्यविधि अनुसार संचालन गर्नु अनलाईन प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि जोर विजोर गर्न सकिन्छ कि जुन सक्नुहुन्छ गर्नुस भनेका थियौँ।
अहिले प्रसासन कार्यालय र विभागबाट अभिभावकको सहमतिमा स्थानिय तहले गर्न सक्ने भन्ने कुरा आएको छ । तर हामी स्थानिय तहले भौतिक रुपमा कक्षा संचालन गर्नु भनेर कुनै पनि विद्यालयलाई निर्देशन दिएका छैनौँ।
५. गाउँगाउँमा विद्यालय अनुगमन गर्न जाँदा आफनै आखाले हेर्दा र अनुभव गर्दा त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ ?
अहिलेको २/३ वर्ष कोभिडको अवस्थालाई हेर्ने हो भने शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था एकदम भयावह अवस्था छ मापन गर्ने अवस्था छैन। भौतिक रुपमा कक्षा संचालन नगर्नु भन्नु पर्ने परिस्थिति छ र शैक्षिक गुणस्तर पनि राम्रो बनाउनुस् भन्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारबाट सिकाई सहजिकरणको लागि भनेर केही रकमहरु प्राप्त भएको छ।
हामीले सबै विद्यालयको खातामा विद्यार्थी संख्याको आधारमा हाल्दिएका छौँ । शिक्षकले उपयुक्त समय मिलाएर यदि भौतिक रुपमा कक्षा संचालन गर्न सक्नु भएन भने पनि घरघरमा गएर टोलटोलमा गएर केही न केही शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप संचालन गर्न सक्नु हुन्छ । तर उहाँहरु गर्नु हुन्न।
विद्यालय चल्नको लागि शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक एउटा ओदानोको तिनवटा खुट्टा जस्तै हो । यो तिन वटा कै समन्वय बिना विद्यालयमा राम्रोसँग गतिविधि संचालन गर्न सकिदैन। र गुणस्तरको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । सकेसम्म समय सन्दर्भ मिलाएर हामी विद्यालयमा कुनै न कुनै रुपमा अनु्गमनमा गएका छौँ।
अनुगमनमा हामीले भौतिक रुपमा हेर्ने,त्यहाँका विद्यार्थीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने र शिक्षक स्टाफको बैठक राखेर आवश्यकता के हो,शैक्षिक गुणस्तर,गुणस्तर भौतिक संरचनाको अवस्था कस्तो छ ? शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नको लागि आवश्यक कुरा के के हुन् ? यो कुरा हामी टिपोर्ट गरेर नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा ल्याएर शिक्षा समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्छौँ । त्यही शिक्षा समितिबाट योजना मार्फत विद्यालयहरुमा योजना बाँडफाँड गर्ने गरीएको छ।
६. नगरपालिकामा आएपछि कस्तो कामहरु सम्पन्न गर्न सक्नु भयो ?
म आएपछि शिक्षकको आवश्यकता भन्दा पनि विद्यालयको पुरा गर्नै पर्ने आवश्यकताहरु जसरी पनि पुरा गरेको छ जस्तो लाग्छ । विद्यालयमा गएर त्यस्को प्रमुख आवश्यकता सम्बोधन गर्ने काम गरेका छौँ। कुनै पनि समस्या पर्दा त्यो विद्यालयको विषयमा म व्यक्तिगत निर्णय गर्दिन त्यहाँका प्रधानाध्यापक र शिक्षक साथीहरुको राय लिएर मात्र गर्ने गरेको छु। विद्यालयबाट श्रोत व्यक्तिको रुपमा आइसकेपछि श्रोत व्यक्तिको रुपमा भनेर थप सेवा सुविधा भनेर नगरपालिकाबाट लिएको छैन।
एउटा शिक्षकको रुपमा मैले तलब पाएको छु । म नगरपालिकामा बसुन्जेल सबै शिक्षक साथीहरुको मनोभावना बुझेर शैक्षिक रुपमा अगाडि बढाउनको लागि म बिना स्वार्थ बिना लाभ निरन्तर रुपमा लागिरहेको छु। शैक्षिक रुपमा भौतिक रुपमा मैले गर्नुपर्ने काम, नगरपालिकाको शिक्षा शाखाबाट अथवा नगरपालिकाको कार्यपालिकाले दिएको निर्देशन,नगर प्रमुखले दिएको निर्देशन, म भन्दा माथि प्रमुख प्रशासकिय अथवा शाखा अधिकृतले दिएको निर्देशन पालना गरेर आफनो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु जस्तो लाग्छ। साथीहरुले गुनासो गर्नु भएको छैन र अब पनि गुनासो आउन दिने छैन भन्ने विषयमा प्रतिबद्ध छु।
७.विद्यालयको भौतिक संरचनाको काम सकिएको हो ?
धेरै जसो भौतिक संरचनाका काम म आउनु भन्दा अगाडि नै सकिसकेका छन् । म आएपछि भौतिक संरचनाका काममा सिफारीस गर्दा त्यहाँ फिल्डमा गएर अनुगमन गरेर मात्र सिफारिस गर्ने गरेका छौँ । अहिले जहाँ विद्यार्थीको सँख्या छ त्यहाँ भौतिक संरचनाको अभाव देखिएको छ। जहाँ विद्यार्थी संख्या एकदम कम छ र भौतिक संरचना बिना अर्थमा खेर गइरहेको अवस्था छ । विद्यार्थी संख्या कम भएको ठाउँमा भौतिक संरचना बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने देखिदैन ।
८. सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउनको लागि विद्यालयलाई विश्वासिलो,अभिभावकले पत्याउने र त्यही अनुसार नतिजा पनि निकाल्न प¥यो, के छ अवस्था ?
सबै भन्दा ठुलो कुरा विद्यालयको प्रशासन नै प्रशासक जस्तो हुनुपर्छ। शैक्षिक कुरा सुधारका लागि शिक्षकहरु सरुवा गर्ने, ५ वर्ष पछि अर्को विद्यालयमा लैजाने गर्दा केही प्रभाव पार्छ तर हाम्रो शिक्षा ऐनले सकेसम्म शिक्षकहरुलाई घर पाएक बनाउने कुरामा विशेष फोकस गर्छ। विद्यालय मर्च गर्ने विषयमा एकदम सोच्न जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरु दक्ष, तालिम प्राप्त, क्षमतावान हुनुहुन्छ।
संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको अनुपातमा हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षकहरु धेरै हुनुहुन्छ । हामीले समयसापेक्ष चलाउनको लागि उहाँहरुलाई तालिमहरु, गोष्ठिहरु संचालन गरिरहनु पर्ने रहेछ। कोभिडको कारणले धेरै तालिमहरु संचालन गर्न सकेका छैनौँ। कोभिडलाई सामान्य रुपमा लिने र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने त्यसोभए कोभिडलाई पनि परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने भावना जागृत गर्नको लागि कोभिड सम्बन्धि मनोपरामर्श कार्यक्रम राखेका थियौँ।
विद्यालयको एकजना सामाजिक मनोपरामर्श दाता हामीले नियुक्ति गर्न भनेका छौँ सबै विद्यालयमा गर्नु पनि भएको छ। मनोपरामर्श दातालाई नगरपालिकामा तालिम दिने र उहाँले आफनो विद्यालयमा गर्नु हुन्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ ल्याएका थियौँ। यसपालि पनि यो कार्यक्रम छ जसरी भएपनि गर्नु पर्छ भन्ने योजनामा छौँ। नगरपालिकाले सोच्नु पर्ने कुरा विद्यालय मर्च नै हो। कुनै विद्यालयमा शिक्षक अभाव छ कुनै विद्यायलमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा धेरै छन्।
निलकण्ठ नगरपालिकाले केही प्राथमिक विद्यालय आधारभुतको १–३, १–५ चलेका विद्यालयमा अनुदान कोटामा शिक्षक राखेको छ। ६–८ चलेको विद्यालय तर एक जना पनि निम्न माध्यामिक दरबन्दी नभएको विद्यालयलाई नगरपालिकाको अनुदानमा शिक्षक राखेको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकामा २८ वटा माध्यामिक विद्यालय छन्। कमसेकम एउटा माध्यामिक विद्यालयमा तीन विषय अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानको एक÷एक जना शिक्षक चाहिन्छ त्यो पु¥याउनको लागि हामीले माध्यामिक अनुदान कोटाको दरबन्दी व्यवस्थापन गरेका छौँ।
एउटा मात्र दरबन्दि भएको विद्यालयमा संघबाट एउटा शिक्षक आवश्यक प¥यो एउटा पनि दरबन्दि नभएको ठाउँमा तीन जना विषयक शिक्षक दिने भनेर बनाएका छौँ। तर अहिले मर्च गर्न सकिने नजिक पाएक परेको विद्यालयलाई नगरपालिकाले जसरी मर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ ।यस्तो गर्दा भौतिक रुपले विद्यालयहरु सम्पन्न हुन्थे,शैक्षिक रुपमा सुभार हुन्थ्यो। नगरपालिकाबाट जुन विद्यालयको लागि शिक्षक दरबन्दि भनेर अनुदानको रुपमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ। शिक्षक अभाव नभएपछि त्यो रकमले शैक्षिक गुणस्तरको अन्य कार्यमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो।
९ .अन्त्यमा, नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा के के कार्यक्रम गर्ने छ ? निति तथा कार्यक्रममा कस्तो विषयहरु समावेश गरिएको छ ?
यो आर्थिक वर्षमा कोभिडको कारणले हाम्रो बजेट घटेको अवस्था छ। हामीले यो भन्दा अगाडि गर्न नसकेको कार्यक्रम र यसपालि ४ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेर लगभग ५ करोड ८० लाख भन्दा बढि रकम छ। यसपालिको योजनामा मनोपरामर्श कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने,शिक्षक खेलकुद कार्यक्रम, विद्यार्थी खेलकुद कार्यक्रम राखेका छौँ।
दलित बालबालिकाहरु जो धेरै निम्न स्तरका छन्, उच्च शिक्षा आसिल गर्न सकिरहेको छैन तिनिहरुको लागि कुनै पनि बालिकाले पढन्बाट बन्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्धेश्यका साथ नगरपालिकाको शिक्षा मार्फत १३ लाख दलित र बालबालिकाको लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति भनेर विनियोजन गरेका छौँ।
जेहेन्दार तथा उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति भनेर १० लाख विनियोजन गरेका छौँ। कम्प्युटर शिक्षाको तालिम, शिक्षकलाई ल्यापटप वितरणका कुरा छ अर्को नयाँ कार्यक्रम बालबालिका सँग मेयर कार्यक्रम राखेका छौँ। बाल कक्षा एकको व्यवस्थापन भनेर कक्षा एकको लागि यो वर्ष पन्ध्रवटा विद्यालयलाई गर्ने र अर्को वर्ष क्रमश गर्दै जाने, अर्को वर्ष २ कक्षालाई गर्दै जाने भनेर कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा स्मार्ट टेलिभिजन सहित हाम्रो लक्ष्य भनेको सबैलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने हो।
नगरपालिकालाई बालमैत्री विद्यालय बनाउने उद्धेश्यले बाल उध्यान बनाउने भनेर नगरपालिकाको १५ वटा विद्यालयमा यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ त्यस्को लागि १५ लाख विनियोजन गरेका छौँ। विषयक रुपमा शिक्षक दक्षता अभिवृद्धि तालिम राखेका छौँ । विषयगत रुपमा विषयगत शिक्षकहरुलाई राखेर विषयगत समिति बनाउने, विषयगत रुपमा परिक्षाका मोडलहरु तयार गर्ने, त्यही अनुसार शैक्षिक गतिविधिहरु संचालन गर्ने भन्ने योजना छ।
स्थानिय पाठ्यक्रम निमार्ण गर्नको लागि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानिय पालिका निमार्ण गर्नको लागि ड्राफ्ट तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मलाइ मेरो नीलकण्ठ भन्ने स्थानिय पाठ्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौँ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज २१, २०७८